Easy-eji PC ka iPhone Nyefee gaa na Nyefee Music, Photos na Ndi ana-akpo
> Resource> Nyefee> PC ka iPhone Nyefee: Nyefee Music, Photos na Ndi ana-akpo Mfe
Mmadụ na mberede ehichapụ foto gị iPhone 4, dabara nke ọma, ị kwadoo niile foto na gị PC? Download ụfọdụ na-ewu ewu songs, psy si gangnam style ka ihe atụ, na olileanya nyefee gị iPhone maka ekele? Mezue PC ka iPhone 4S nyefe, ihe ị ga-eme?
Sapeta iTunes maka enyemaka? Ọ ga-ewepụ faịlụ niile zọpụta na gị iPhone n'oge mmekọrịta. N'ezie, ị na nwere ọzọ nhọrọ. A bụ m nkwanye n'ihi na ị - ihe dị mfe na-eji PC ka iPhone nyefe, Wondershare TunesGo Ochie (Windows) ma ọ bụ Wonershare TunesGo Ochie (Mac). Ma nsụgharị nke a usoro ike ka ị na nyefee music, videos, listi ọkpụkpọ, foto, kọntaktị, na ndị ọzọ site na kọmputa gị iPhone. E wezụga, ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 na iPhone 3GS, ma na-akwado ọhụrụ iOS 9/8.
Download na wụnye TunesGo Ochie inwe a na-agbalị!
Detuo music, videos, foto na kọntaktị na PC na-iPhone transfer
Ma nsụgharị nke TunesGo Ochie arụ ọrụ nke ọma. Ebe a, anyị na-windows version dị ka ihe atụ. Dị ka a Mac onye ọrụ, ị nwere ike ịmụta yiri nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na PC na-iPhone Nyefee
Tupu ị na-amalite, wụnye na-agba ọsọ a PC ka iPhone transfer na PC gị. Jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB. Nke a na usoro ga-akpaghị aka ịchọpụta gị iPhone ka anya dị ka ọ na-ejikọrọ.
Cheta na: Iji jiri TunesGo Ochie, ị kwesịrị iji wụnye iTunes na kọmputa gị mbụ.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta music, video, foto na kọntaktị na PC na-iPhone 3GS transfer
Ka idetuo music site na kọmputa na-iPhone, ị nwere ike pịa "Media" ke ekpe ndekọ osisi. Mgbe ị na-abịa media window, pịa "Music" n'elu akara. Na music window, pịa triangle n'okpuru "Tinye" ịhọrọ "Tinye File" ma ọ bụ "Tinye nchekwa". Họrọ gị chọrọ songs ma ọ bụ music nchekwa. Mbubata ha gị iPhone.
Cheta na: TunesGo Ochie bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 na iOS 9 enweghị ihe ọ bụla nsogbu.
Mbubata videos, ị dị nnọọ mkpa pịa "Media"> "Movies"> ihe triangle n'okpuru "Tinye"> "Tinye File" ma ọ bụ "Tinye nchekwa".
E wezụga music na vidiyo, i nwere ike tinye prodcast, iTunes U, TV na-egosi na ndị ọzọ gị iPhone kwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ mbubata playlist, pịa "Playlist"> ihe triangle n'okpuru "Tinye"> "Tinye Playlist si Computer" ịgbakwunye playlist.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị ịzụta ọhụrụ iPhone 3GS na bu n'obi na-mbubata foto iPhone 3GS na PC na-iPhone 3GS Nyefee, ị kwesịrị pịa "Photos" iji bugote photos management window.
Mgbe ahụ, pịa abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Tinye". Na ndọpụta ndepụta, họrọ "Tinye nchekwa" nyefee album gị iPhone. Ọ bụrụ na ị chọrọ mbubata ụfọdụ foto. Imeghe album ma ọ bụ nchekwa, dị ka Photo Library na pịa "Tinye". Họrọ foto na ị na-eme atụmatụ mbubata wee pịa "Open".
Ma ọ bụ, gị ọbụna ike ịdọrọ na dobe foto ma ọ bụ albums site na kọmputa na-iPhone dị ka mma. Ọ bụ n'ezie adaba.
Ọzọkwa, a usoro, ị nwere ike ịkwaga kọntaktị site na kọmputa na-iPhone. Pịa "Ndi ana-akpo" ke ekpe ndekọ osisi. Na kọntaktị window, pịa "Import / Export". Na esiri-ala menu, họrọ "Import kọntaktị site na kọmputa." Na esiri-ala menu na nri, họrọ "si vCard faịlụ".
Cheta na: The Mac version anaghị akwado importing kọntaktị gị iPhone n'ihi na oge ịbụ.
Download a PC ka iPhone transfer ugbu a iji chọta ihe kediegwu atụmatụ!